Munin'ina waVaMaguwu Anobvisiswa Mari yeChibatiso
Chivabvu 31, 2010
Dare redzimhosva rekwaMutare rabvisisa mari yechibatiso, VaLisben Maguwu, munin’ina wemukuru weCentre for Research and Development, VaFarai maguwu, kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaLisben Maguwu vari kupomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo.
Gweta raVaLisben Maguwu, VaPeter Tindiri, vaudza dare kuti VaLisben Maguwu vakatochwa nemapurisa apo vakange vari mumaoko emapurisa.
VaTindiri vakurudzira dare kuti riferefete kutochwa pamwe nekushungurudzwa kwakaitwa VaLisben Maguwu nemapurisa. Vatiwo kana nyaya yaVaLisben Maguwu yava kutongwa, dare rinofanirwa kutarisa nyaya iyi richiisawo pamberi pemafungiro aro zvakaitika kumusungwa uyu.
Ukuwo masangano akazvimirira ashoropodza neMuvhuro mapurisa nekuenderera mberi kwaari kuita achishungurudza magweta anorwira kodzero dzevanhu.
Izvi zvinotevera kushungurudza nemapurisa kwaakaitwa VaBlessing Nyamaropa, avo vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights kwa Mutare nemugovera.
VaNyamaropa vanoti vakashungurudzwa nemapurisa mushure mekunge vaenda kuMutare Central Police Station kunotsvaga munin’ina waVaMaguwu.
Chief Superintendent Crispen Makedenge na Detective Inspector Henry Dowa vamwe vamapurisa ari kunzi akatyisidzira pamwe nekushungurudza Va Nyamaropa, vachivabvunza kuti VaMaguwu vainga vakahwanda kupi.
VaNyamaropa vati kushungurudzwa kwavo kunoratidza kuti vanorwira kodzero dzevanhu vanoonekwa sevavengi vehurumende.
Hurukuro naVa Blessing Nyamaropa